Raage November 10, 2017
(Stockholm) 10 Nof 2017 – Waxaa caawa ballansan labada xul ee Sweden iyo Talyaaniga oo lugta hore ee kala baxa Koobka Adduunka 2018 Ruushka ka dhacaya xagaaga soo aaddan ku ciyaaraya gegada Friends Arena ee magaalada Stockgolm.
Dhanka Sweden: Janne Andersson wuxuu dhaqan gelinayaa 4-4-2, waxaana qalbiga gaashaandhigga taagan Lindelof iyo Granqvist, dhanka dadabka midig waa daafaca Bolognese-ka ah ee Krafth. Khadka dhexe waxaa furaha u sida Albil Ekdal iyo Larsson. Weerarku waa joogga Toivonen-Berg, Guidetti waa kayd.
Dhanka Italy: Ventura waxaa ka fadhiya Simone Zaza: Qannaaska Valencia ayaa tababarka uga baxay dhaawac jilibka ah. Waxaa bedelaya Belotti oo ka cadcad Eder. Waxaa Arbacadii sidoo kale muruq-daal ku baxay Spinazzola. Waxaa maqan El Shaarawy iyo D’Ambrosio.
12 JOHNSSON, 14 HELANDER, 5 JANSSON, 2 LUSTIG, 13 JOHANSSON, 19 ROHDEN, 22 SEMA, 18 OLSSON, 23 DURMAT, 15 SVENSSON, 11 GUIDETTI, 21 THELIN
12 DONNARUMMA, 22 PERIN, 13 ASTORI, 2 RUGANI, 21 ZAPPACOSTA, 5 GAGLIARDINI, 7 FLORENZI, 14 JORGINHO, 20 BERNARDESCHI, 17 EDER, 10 INSIGNE, 23 GABBIADINI
Morata oo doonaya inuu noqdo qofkii ugu horreeyay oo sheekadan ka dhaxla Mourinho
XOG: PSG oo doonaysa inay AC Milan ka dul qaaddo Antonio Conte (Xiriir durba dhacay)